जब बुबाले अनलाइन गेम खेल्न नदिएपछि २० बर्षिय युवकले गरे कसैले सोच्नै नसक्ने काम – Dainik Sangalo
जब बुबाले अनलाइन गेम खेल्न नदिएपछि २० बर्षिय युवकले गरे कसैले सोच्नै नसक्ने काम
July 31, 2020 276
काठमाण्डौं । बुबाले अनलाइन गेम खेल्न नदिएपछि २० बर्षिय युवकले आफैंलाई गो’ली हा’नी देह त्याग गरेका छन् । भिडियो गेममा ल त बसेका ती युवकले बाबुको गा ली सहन नसकेर देह त्याग गरेका हुन् । बाबुको लाइसेन्स प्राप्त रिव’ल्व’र प्रयोग गरेर उनले आफूलाई गो ली हा नी देह त्याग गरेका छन् । यो घटना भारतको जालन्धरमा घटेको हो । पुलिसका अनुसार युवक अनलाईन गेम खेल्ने ल तमा थिए । अभिभावकहरूले उनलाई गा ली गरे र उसलाई अनलाईन खेल खेल्न दिएनन् । यसपछि उनी रि’साए र आफ्नै ज्यान लिए ।
म’र्नु अघि, केटाले एक नोटमा लेखेका छज् कि ‘म धेरै नराम्रो छु ।’ केटाका बुबा भन्छन् कि उसको छोरो दिनभरि अनलाइन गेमहरू खेल्थ्यो । बीकॉम दोस्रो वर्षको उसको परिक्षा फल पनि यसै ल तका कारण बिग्रियो । बाबुले उसलाई धेरै चोटि समझाउन खोजे तर छोराले सुनेनन् । प्रहरीले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
यो घटना जालन्धरको बस्ती शेख क्षेत्रमा भएको हो । २० वर्षीय माणिक शर्मा मोबाइलमा अनलाइन गेम खेल्ने यति ल तमा थिए कि उनले आफ्नो अध्ययनलाई जो’खिममा पारे। जसको कारण संख्या बीकम दोस्रो वर्षमा निकै कम नम्बर आएको थियो । परिवारले आफ्नो छोरालाई धेरै पटक समझाउन खोज्यो तर उसले सुन्न अस्वीकार गर्यो । उसले सँधै बिहान र बेलुका, राती, दिउसो मोबाइलमा खेलहरू खेल्दै बिताउने गथ्र्यो ।
बिहीबार बिहान, बुबाले उनलाई अनलाइन खेल नखेल भन्दै गा ली गरे र मोबाइल खो से र आफूसँगै राखे । उनी यस कुरामा ती युवक यति रि’साए कि उनले आफ्नो बुबाको लाइसेंस रिभ’ल्भ’रले घरको पछाडि कोठामा ताला लगाएर देह त्याग गरे। यस घटना पछि परिवारमा शोक छाएको छ ।
मृ’तक माणिकका बुबा चन्द्रशेखरको आफ्नै मेडिकल स्टोर छ। उनले भने कि ‘उसको छोरो दिनभरि अनलाइन गेमहरूमा व्यस्त हुन्थ्यो। जसको कारण उसको अध्ययन बिग्रँदै थियो। एक दिन गेम हार्दा रि’साएर उनले आफ्नो फोन पनि फु’टायो । उ कसैको कुरा सुन्दैनथ्यो ।’ यस घटनाअनुसन्धान गरिरहेका, पुलिस स्टेशनका इन्चार्ज रविन्द्र कुमारका अनुसार २० वर्षको युवक अनलाइन खेल खेल्ने ल’तमा लागेका थिए । बाबुआमाले उनलाई गा ली गरे र खेल खेल्न निषेध गरे। यस पछि आवेशमा आएर, उनले आफूलाई गो’ली हा’ने ।
Prevनेपाली भूमिमै जान खोज्दा भारतीय एसएसबीले सशस्त्र प्रहरी टोलीलाई भने, ‘योभन्दा अघि नबढ्नु यो माथिकै आदेश हो’
Nextकार्टुनमा भेटिएको बच्चालाई एक्कासि के भयो ? हस्पितलमै भेटिए बुवा,बुवा मिडियामा , हेर्नुहोस भिडियो
१० वर्षीय बालकले गरे आ’ त्म ह’ त्या, यस्तो छ उनको दुः,खदायी कथा पुरा पढ्नुहोस र सेयर गर्नुहोस
काठमाडौँ बाहिरबाट आउनेका लागि यस्तो नयाँ नियम: आजैबाट लागू हुने, हेर्नुहोस्
आजको राशिफल : वि.सं.२०७७ साल माघ ०३ गते । शनिबार । ईश्वी सन् २०२१ जनवरी १६ तारिख
रा,जद्रो,हको मु,द्दामा राजेन्द्र महतोलाई २५ वर्ष कै,द ? सबैको जानकारीको लागि सेयर गरौं